सहिद गोविन्द गौतमको घरमा पुग्दा.. - Lumbini Times
देशको सीमा जोगाउन गएका गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाबलले प्रहार गरेको गोली लागी मृत्यु भएको खवर सुनेपछि म राम्रोसंग निदाउन सकिन । निदाउँ पनि कसरी यो घटना सामान्य थिएन् । भारतीय ज्यादतीले सीमा मात्र नागेन एउटी आमाको काख रित्तो बनायो । एक चेलीको सिन्दुर खोस्यो । कलिला नानीहरुको भविश्य नै अन्धकारमय बनायो, अनि नेपाल आमाको छातीमाथी दमन र शोषणको बुट बजार्यो । यो सव हामी कहिले सम्म सहि रहने । कहिले सुस्ता दुख्छ कहिले आनन्दपुर । कहिले जङगे पिल्लर ढल्छ त कहिले नेपाली छोरो ।
यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेको बेला गोविन्द गौतमको घरमा पुग्ने सोच आयो । यो कुरा मैले चलचित्र निमार्ता संघ नेपालका साथीहरुसंग राखें । साथीहरुले यो कुरामा सहमती जनाए पछि विलम्ब नगरी चैत ३ गते काठमाडौंबाट कञ्चनपुरकोलागि प्रस्थान गर्यौ ।
हाम्रो समुहमा चलचित्र निर्माता संघ नेपालका महासचिव विमल पौडेल, सचिव मनोज श्रेष्ठ, कार्यसमिती सदस्य मुनाल घिमिरे, कलाकार विरेन्द्र सिङ, निर्देशक श्रीराम पुडासैनी, निर्माता डा. अमित विश्वास, कलाकार राजकुमार जोशी, मिना स्वप लगायत हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो लक्ष्य भनेको गोविन्दजीको परिवारलाइ सद्भाव र सान्तवना दिने, सीमा बचाउन स्थानीयले जुन साहास देखाए, उनीहरुलाइ प्रत्यक्ष भेटेर यो विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्धा बनाउने रहेको थियो ।
अर्को तर्फ राष्ट्रियताको विषयलाइ लिएर म र मेरा साथीहरुले निरन्तर फिल्म बनाईरहेका छौं । सुस्ताको पिडालाइ फिल्ममा उतारेका छौं । भिमदत्तलाइ सहिद घोषण गर्नु पर्छ भनेर फिल्मबाटै माग गयौ । सरकारले भिमदत्तलाइ सहिद गर्यो । यसकारण पनि हामी त्यहाँ पुग्नु पर्छ भन्ने लाग्यो ।
गोविन्दको घरमा पुग्दा
खै किन हो कुन्नी हामीलाइ धनगढीबाटै प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुव नगरका प्रहरी निरीक्षक दलाराम टमाटाले अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ तपाइहरुको साथमा हाम्रो टोली पनि जान्छ भने पछि बल्ल हामीले त्यहाँको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई बुझ्यौं ।
पुनर्वास नगरपालीका आनन्दपुर वडा नं. ८ मा रहेको सहिद गोविन्द गौतमको घरमा हामी चैत ४ गते पौउने ४ बजे पुग्यौं । हामीसंग स्थानीय साथीहरु हिमेश र धिरजजी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
किरियामा बस्नु भएका गोविन्दका वुवा र श्रीमतीलाइ देख्ने वित्तीकै मन थाम्न बढो मुस्किुल पर्यो । हजुरआमाको वरिपरि खेलिरहेका तीन छोरीहरुलाइ हेर्दा उनीहरुका आँखाले सायद बाबालाइ खोजिरहेको थियो । तर बाबाको काख भारतीय ज्यादतीले लुटिदिइ सकेको थियो । राजनीतिकदलका कुनै कार्यकर्ताको हत्या हुदाँ कति चर्को स्वरमा चिच्चाएर उनिहरु भन्छन सरकार हत्यारलाई कारवाही गर । तर एक निर्दोस नेपाली नगारीक मारिदा यहाँ कोही चर्को स्वरमा बोल्न सकेका छैनन् ।
छोरीहरुलाई अंगालोमा बेरेर मलाइ चिच्चाउन मन लाग्यो ए नेता हो गोविन्दलाइ गोलीहान्नेलाइ किन कारवाही गर भन्न सक्दैनौ । तर के गर्नु हाम्रो आवाज कस्ले सुनिदिन्छ र ? यदि नागरिकको आवाज सुन्ने नेता भएको भए घटना अघि पनि पटक–पटक आनन्दपुरमा विवाद हुदाँ किन राज्य पुग्न सकेन । यो हाम्रो भुमी हो भन्न किन सकेन ।
त्यहाँका मानिसहरु बसोवास र जिवनशैलीलाइ हेर्दा मलाइ लाग्यो उनिहरुले सुरक्षाको महशुस गर्न सकेका छैनन् ।
छोरीहरुलाइ एकै छिन काखमा राखेर कुराकानी गरे तर उनिहरु धेरै बोलेनन् । बोलुन पनि कसरि त्यहाँ परिपक्क मानिसहरु समेत खुलेर बोल्न सकिरहेका थिएनन् ।
जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ तर गोविन्दजीलाई जसरी मारियो यो घटनाले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ । म पुग्दा स्थानीयहरु मौन थिए । एक किसिमको त्रास थियो र अझै पनि त्यस्तै छ ।
आँशुलाई शक्तिमा बदल्दै आमा
बाग्लुङबाट बसाइ सरेर कञ्चनपुरमा पुगेको गौतम परिवार यतिबेला शोकमा छ । गोविन्दकी आमाले त्यही शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँसंग कुराकानी पनि गर्यौ । आँशु पुच्दै उहाँले भन्नु भयो मेरो एउटा छोरा मरेपनि तपाइहरुलाइ देख्दा मेरा धेरै छोरा रहेछन भन्ने लाग्यो । उहाँले बच्चाहरुको शिक्षादिक्षामा राज्यले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय ब्यत्त गर्नु भयो । धेरैले धेरे थरिको आश्वासन दिए पनि गौतम परिवारमा राज्यको तर्फबाट सहानुभूति दिन कोही पनि पुगेको रहेन छ ।
घटना घटेको ठाँउमा गोविन्दको शालिक बनाइदिए हुन्थ्यो उहाँले करुण देखाउनुभयो । उहासँग उत्तिकै आक्रोस पनि थियो । उहाँको आक्रोसले भन्दै थियो, सीमामा पर्खाल लगानु पर्छ वावु पर्खाल । स्थानीयहरुलाइ हामीले भेटेर कुरा गर्दा पनि सीमामा पर्खाल लगाउनु पर्ने कुरालाइ प्राथकिता दिएको पाइयो ।
मुख्यरुपमा स्थानीयको माग छ घटनाबारे भारतले माफि माग्नु पर्छ ।
यस्तै गोविन्दको श्रीमतीलाइ जागीरको ब्यवस्था गरिदिनु पर्ने माग पनि स्थानीयको छ । गोविन्दका वुवा र श्रीमती बोल्न सक्नु भएन । हामीले धेरेबेर आमासंग र स्थानीयसंग कुराकानी गयौं । तर उनीहरु बोल्न गाह्रो मानिरहेका थिए । अझै पनि केही हुने हो की भन्ने त्रास कायमै रहेको हामीले पायौ ।
हामी गौतम परिवारलाइ सहयोग गर्ने योजनाका साथ गएका थिएनौं । तर त्यहाँ पुगेर घरको अवस्था देखेपछि साथीहरुसंग सल्लाह गरेर थौरै भएपनि आर्थिक सहयोग गर्ने निधो गर्यौ । हाम्रो समुहमा भएका साथिहरुसंग रकम संकलन गर्दा २५ हजार ६ सय जम्मा भयो । त्यो रकम आमालाइ हस्तान्तरण गर्यौ । उहाँहरुलाइ सहयोगको घोषण धेरै ठाँउबाट भएपनि यो नै प्रतक्ष्यरुपमा पहिलो सहयोग रहेछ । यदि सरकारले छोरीहरुको शिक्षाकोलागि सहयोग नगरे चलचित्र निर्माता संघले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले जनाएका छौ ।
अब हामीले यसो गछौं
आनन्दपुरका स्थानीयहरु आनन्दले बाच्न पाउनु पर्छ । उनिहरुमात्र होइन विभिन्न ठाँउमा सीमा जोगाएर बसेका नेपालीहरुमाथी हेपाह प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्छ । यो हाम्रो माग हो । कञ्चनपुर घटनालाइ सामान्यरुपमा हेरियो भने हामी माथी अझै दमन हुन सक्छ । सीमा मिचिदै जान्छ । यसकारण आनन्दपुरका स्थानीयको जस्तै हाम्रो माग पनि हो । यो घटनाका लागि भारतले माफि माग्नु पर्छ । यसको लागि हामीले दबाव मुलक अभियान सुरु गर्नु पर्छ र हामीले गर्दै पनि छौं । यो अभियान अन्तरगत नेपालमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने, राष्ट्रियतालाइ बलियो बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने लगाएतका कार्यक्रमहरु हामीले तय गरेका छौं ।
मलाई लाग्छ सहिद भनेको पार्टी र स्वार्थ भन्दा माथि हुनु पर्छ । जुन कुरा गोविन्दमा थियो । नेपाली र नेपालको भूमीमाथी भइरहेको थिचोमिचोे विरुद्ध लड्दा उनले जसरी आफ्नो ज्यानको आहुती दिए यसै गरी स्वार्थ र पार्टी भन्दा माथी उठेर राष्ट्रियता बलियो बनाउन हामीहरु लाग्यौं भने बल्ल सीमा जोगिन सक्छ । देशको भूमी जोगाउन जसरी गोविन्द लडे त्यसैगरी हाम्रा नेताहरुले कुनै शक्ति सामु शिर ननिहुराई अघि बढे भने मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ । गोविन्दको जस्तै त्याग गर्न सक्ने साहस तपाइसंग छ त नेता ज्यू ? मेरो यो एउटै प्रश्न छ ।
कञ्चनपुरबाट फर्केपछि यहि प्रश्न मनमा उठिरहेको छ । गोविन्द तिमिले सीमामा जङगे पिल्लर जस्तै उभिएर जसरी गोली थाप्यौ तिम्रो सपना पुरा गर्न म निरन्तर लाग्ने छु । सीमा जोगाउन तिमीले देखेको सपना पुरा हुनुपर्छ सवैको प्रयास यसमा रहोस हाम्रो समर्थन र साथ सदै भरी रहने छ ।
चलचित्र निर्माता संघ नेपाल
सहिदको सपना र नँया नेपाल